VaEfremu vanopopotera Gidhiyoni (1-3)
Madzimambo eMidhiyani anoteverwa ourayiwa (4-21)
Gidhiyoni anoramba kuva mambo (22-27)
Pfupiso yeupenyu hwaGidhiyoni (28-35)
8 Pashure paizvozvo varume vaEfremu vakati kwaari: “Chii chawatiitira ichi? Wakaregerei kutishevedza pawakaenda kunorwa nevaMidhiyani?”+ Uye vakamupopotera nehasha.+ 2 Asi iye akati kwavari: “Ini ndaitei kana ndichienzaniswa nemi? Zvakaunganidzwa naEfremu+ hazvisi nani pane goho remazambiringa raAbhi-ezeri+ here? 3 Mwari akaisa Orebhu naZeebhu+ machinda eMidhiyani mumaoko enyu, uye chii chandaita kana ndichienzaniswa nemi?” Paakataura izvi, hasha dzavo dzakabva dzaserera.* 4 Gidhiyoni akabva asvika kuJodhani, akayambuka rwizi rwacho. Iye nevarume 300 vaaiva navo vakanga vaneta, asi vakaramba vachitevera. 5 Saka akati kuvarume veSukoti: “Ndinokumbirawo kuti mupe varume vandiinavo chingwa, nekuti vaneta uye ndiri kudzingirira Zebha naZarimuna, madzimambo eMidhiyani.” 6 Asi machinda eSukoti akati: “Zebha naZarimuna vatova muruoko rwako here zvekuti tingapa uto rako chingwa?” 7 Gidhiyoni akabva ati: “Nezvamataura izvozvo, Jehovha paachaisa Zebha naZarimuna muruoko rwangu, ndichakukwapurai neminzwa nemakwenzi ane minzwa emurenje.”+ 8 Akabva ikoko akakwidza kuPenueri, akavakumbirawo zvimwe chete izvozvo, asi varume vePenueri vakamupa mhinduro yakangofanana neyevarume veSukoti. 9 Saka akatiwo kuvarume vePenueri: “Pandinodzoka nerugare, ndichakoromora shongwe iyi.”+ 10 Panguva iyi Zebha naZarimuna vaiva muKakori nemauto avo, varume vanenge 15 000. Ava ndivo chete vakanga vasara pauto rese reVekumabvazuva,+ nekuti varume 120 000 vaiva nemapakatwa vakanga vafa. 11 Gidhiyoni akaramba achikwira nenzira yevaya vaigara mumatende kumabvazuva kweNobha neJogbheha,+ akarwisa musasa wevavengi vacho, avo vakanga vakavarairwa. 12 Zebha naZarimuna pavakatiza, akabva avatevera, akabata madzimambo acho maviri eMidhiyani, Zebha naZarimuna, musasa wese ukavhunduka. 13 Gidhiyoni mwanakomana waJoashi akabva adzoka kubva kuhondo nenzira yekumupata unokwidza kuHeresi. 14 Ari munzira akabata jaya rekuSukoti, akaribvunzurudza. Jaya racho rakabva ramunyorera mazita emachinda neevakuru veSukoti, varume 77. 15 Akabva aenda kuvarume veSukoti akati: “Hevano Zebha naZarimuna vamakandishora nezvavo muchiti, ‘Zebha naZarimuna vatova muruoko rwako here zvekuti tingapa varume vako vaneta chingwa?’”+ 16 Akabva atora vakuru veguta racho uye akatora minzwa nemakwenzi ane minzwa emurenje, akadzidzisa varume veSukoti chidzidzo nazvo.+ 17 Uye akakoromora shongwe yePenueri,+ akauraya varume veguta racho. 18 Akabvunza Zebha naZarimuna kuti: “Varume vamakauraya kuTabhori vainge vakaita sei?” Ivo vakati: “Vakanga vakaita sewe, mumwe nemumwe wavo akaita semwanakomana wamambo.” 19 Iye akati: “Vaiva vanin’ina vangu, vanakomana vaamai vangu. Chokwadi, naJehovha mupenyu, kudai makanga musina kuvauraya, ndaisazofanira kukuurayai.” 20 Akabva ati kuna Jeteri dangwe rake: “Simuka, vauraye.” Asi jaya racho harina kuvhomora bakatwa raro; raitya, nekuti rakanga richiri mukomana wechidiki. 21 Saka Zebha naZarimuna vakati: “Simuka iwewe utiuraye, nekuti murume chaiye anooneka nesimba rake.” Saka Gidhiyoni akasimuka, akauraya Zebha naZarimuna,+ akatora zvishongo zvakaita semwedzi uchangogara zvaiva mumitsipa yengamera dzavo. 22 Gare gare varume veIsraeri vakati kuna Gidhiyoni: “Titonge, iwe nemwanakomana wako nemuzukuru wako, nekuti wakatiponesa paruoko rwevaMidhiyani.”+ 23 Asi Gidhiyoni akati kwavari: “Ini handisi kuzokutongai, uyewo mwanakomana wangu haasi kuzokutongai. Jehovha ndiye achakutongai.”+ 24 Gidhiyoni akatiwo: “Regai ndikukumbirei chinhu ichi chimwe chete: mumwe nemumwe wenyu ngaandipe rin’i yepamhino kubva pazvinhu zvake zvaakapamba.” (Nekuti vaya vavainge vakunda vaiva nemhete dzepamhino dzegoridhe, sezvo vaiva vaIshmaeri.)+ 25 Vakapindura kuti: “Chokwadi tichakupa.” Vakabva vawaridza nguo uye murume mumwe nemumwe akakanda pairi rin’i yepamhino kubva pazvinhu zvake zvaakapamba. 26 Uremu hwerin’i dzepamhino dzegoridhe dzaakanga akumbira hwakasvika mashekeri* egoridhe 1 700, tisingabatanidzi zvishongo zvakaita semwedzi uchangogara, nezvishongo zvemuhuro, nenguo dzeshinda yepepuru zvaipfekwa nemadzimambo eMidhiyani, uye zvishongo zvemuhuro zvengamera.+ 27 Gidhiyoni akagadzira efodhi*+ negoridhe racho, akaiisa panooneka muguta rake reOfra;+ uye vaIsraeri vese vakaita unzenza hwekuinamata ipapo,+ uye yakava musungo kuna Gidhiyoni neimba yake.+ 28 Saka vaMidhiyani+ vakakundwa nevaIsraeri, uye havana kuzovadenha* zvakare; uye nyika yakava nezororo* kwemakore 40 mumazuva aGidhiyoni.+ 29 Saka Jerubhaari+ mwanakomana waJoashi akadzokera kumba kwake akagara ikoko. 30 Gidhiyoni akava nevanakomana 70,* nekuti aiva nemadzimai akawanda. 31 Murongo* wake aiva kuShekemu akamuberekerawo mwanakomana, uye Gidhiyoni akamutumidza kuti Abhimereki.+ 32 Gidhiyoni mwanakomana waJoashi akazofa akura chaizvo, akavigwa muguva rababa vake Joashi raiva muOfra yevaAbhi-ezeri.+ 33 Gidhiyoni paakangofa, vaIsraeri vakatangazve kuita unzenza hwekunamata vanaBhaari,+ uye vakagadza Bhaari-bheriti kuti ave mwari wavo.+ 34 VaIsraeri havana kuyeuka Jehovha Mwari wavo,+ akanga avanunura muruoko rwevavengi vavo vese vainge vakavapoteredza;+ 35 uyewo havana kuratidza rudo rusingachinji kuimba yaJerubhaari, iye Gidhiyoni, nekuda kwezvakanaka zvese zvaakanga aitira Israeri.+
^ ChiHeb., “mweya yavo yakadzikama ikarega kunetsana naye.”
^ ChiHeb., “havana kuzosimudza musoro wavo.”
^ Kana kuti “nerunyararo.”
^ ChiHeb., “akava nevanakomana 70 vakabva muchiuno chake.”